Mayelana NATHI - HANGZHOU LINAN HUASHENG DAILY NECESSITIES CO., LTD
Singabakhiqizi abaqeqeshiwe bemikhiqizo yokuhlanza engeyona eyelukiweyo kusukela ngonyaka ka-2003,
Singamabhizinisi aphethwe ngumndeni, yonke imindeni yethu izinikela embonini yethu.
Ibanga lethu lomkhiqizo libanzi, ikakhulu likhiqiza amathawula acindezelwe, ama-wipe owomile, ama-wipe wokuhlanza ekhishini, amathawula wokugoqa, ama-remover wipe, izesuli zomntwana ezomile, ama-wipe wokuhlanza wezimboni, imaski yobuso ecindezelweyo, njll.
Imboni yethu ivunyelwe yi-SGS, BV, TUV ne-ISO9001. Sineqembu lobuchwepheshe lokuhlaziya umkhiqizo, umnyango we-QC kanye neqembu lokuthengisa.
Sineziqu eziyizinkulungwane eziyishumi zomhlaba wonke ezihlanzekile. Yonke imikhiqizo yenziwa ngaphansi kwe-workshop ehlanzekile eqinile.
Sinezinto 15 amasethi imishini kokucindezelwa amathawula onomfutho kanye buso ecindezelwe yobuso.
Sinemigqa emi-5 yokukhiqiza yamathawula wokugoqa ukwanelisa imfuneko yamakhasimende ethu yamanje, futhi sakha imishini emisha.
Sinemigqa emi-3 yokukhiqiza yokukhiqiza ukusula okomile emasakeni.
Umphathi wethu, ongubaba wethu, ochwepheshe kuyo yonke imishini, ngakho-ke yonke imishini eshabhu lethu ilungiswa yedwa ngesici esiyingqayizivele. Kwenza umkhiqizo wethu ube muhle kakhulu futhi ube namandla aphezulu wokukhiqiza.
Kuze kube manje, cishe wonke amaklayenti angabalingani bethu bebhizinisi besikhathi eside. Sakha ubudlelwane bebhizinisi ngokuya ngentengo yokuncintisana, ikhwalithi enhle, isikhathi esifushane sokuhola kanye nensizakalo enhle.
Ngiyethemba ukuthi nizoba ngabalingani bethu futhi!
Sizokunikeza imikhiqizo enelisekile kanye nensizakalo.
Sine ukuqeqeshwa kaningi ithimba yokuthengisa ukuzithuthukisa. Hhayi kuphela ukuxhumana namakhasimende, kodwa futhi nensizakalo kumakhasimende ethu.
Sihlose ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezinhle kumakhasimende ethu, sisize amakhasimende ethu ukuxazulula izinkinga ngesikhathi sokuxhumana kwabo kophenyo.
Lonke ikhasimende noma ongaba yikhasimende, kufanele kube kuhle ukubaphatha. Akunandaba ukuthi bazobeka i-oda kithi noma cha, sigcina isimo sethu esihle kubo baze bathole imininingwane eyanele yemikhiqizo yethu noma imboni yethu.
Sinikeza amasampula kumakhasimende, sinikeze ukuxhumana okuhle kwesiNgisi, sinikeza insizakalo ngesikhathi.
Ngokuqeqeshwa nokuxhumana nabanye, siyayibona inkinga yethu yamanje futhi sixazulula izinkinga ngesikhathi ukuze sizithuthukise.
Ngokuxoxa nabanye, sithola eminye imininingwane evela emhlabeni jikelele. Sabelana ngolwazi lwethu futhi sifunde komunye nomunye.
Lokhu kuqeqeshwa kweqembu akusisizi kuphela ukuthuthukisa amakhono okusebenza, kepha futhi nomoya wokwabelana nabanye, injabulo, ingcindezi noma ukudabuka.
Ngemuva kwakho konke ukuqeqeshwa, siyazi ukuthi singaxhumana kanjani namakhasimende, sazi izidingo zawo futhi sifinyelele ukubambisana okwanelisayo.
Ukuvakashela amaklayenti eFrance
Umbukiso waseDubai ngonyaka we-2016
I-Dubai Exhibition ngonyaka we-2017
Iklayenti Lokuvakashela eYurophu ngonyaka we-2017
Japan Isentha e Osaka ngo-2015 ngonyaka
IPoland Exhibition eWarsaw ngonyaka we-2016
ICanton Fair ngonyaka we-2015